လူနည်းစုငှားရမ်းမှုတိုးတက်မှုကိုအစီရင်ခံစာကတင်ပြသည် ငါက Mac ပါ
Apple သည် ၀ န်ထမ်းများမတူကွဲပြားမှုကိုအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မျှသာရှိသေးသည် စိတ်ပျက်စရာ, နှင့်ယခု Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုအစီရင်ခံစာနှင့်အတူပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ပဲလ်ကမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တွင်အပြင်းအထန်အပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသော်လည်း၊ လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်.
ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာ link ကိုထည့်ထားသည့်သီးခြားကဏ္တစ်ခုတွင် Apple က၎င်းကိုငှားရမ်းထားသည်ဟုဖော်ပြသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမျိုးသမီး 11.000 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကထူးခြားတဲ့ ၆၅% တိုး၊ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကရရှိသောကိန်းဂဏန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Apple ကငှားရမ်းထားသည် 2.200 အနက်ရောင်န်ထမ်း y ၂,၇၀၀ ဟစ်စပန်းနစ်နှင့်လက်တင်အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်လုပ်ကိုင်သည် နှစ်စဉ်တိုးတက်မှုနှုန်း ၅၀% နှင့် ၆၆%အသီးသီး။
Apple ၏မတူကွဲပြားမှုအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအင်အားသည်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်သည် 100.000 န်ထမ်းလူနည်းစုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Thurgood Marshall ကောလိပ်ရန်ပုံငွေကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုပညာရေးအားပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိပါသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရအနက်ရောင်ကောလိပ်များနှင့်ကျောင်းသားများကိုနည်းပညာအတွင်းအခွင့်အလမ်းများပေးခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားများကိုကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာကိုအမေရိကရှိကျောင်းများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများရှိစီးပွားရေးအရအရအခွင့်အလမ်းနည်းဆုံးလူနည်းစုများထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ရန်ဆက်သွယ်ထားသည်။
၀ န်ထမ်းတွေအတွက် Apple ပြသတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ ၀ င်ငွေသိပ်မများလှပါဘူး လုပ်သားအင်အား၏ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသားများဖြစ်သည်နေ 31% အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Apple ၏အမျိုးသားအရေအတွက်သည်လုပ်သားအင်အား၏ ၇၀ ရာနှုန်း၊ အမျိုးသမီးများကစုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ ၃၀% ဖြစ်သည်။ The 55% အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြောင်း 2014 ခုနှစ်န်ထမ်းစုစုပေါင်းအရေအတွက် အဖြူရောင်ပြိုင်ပွဲနှင့်ထိုရာခိုင်နှုန်းယခုဖြစ်ပါတယ် 54%.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » အစီရင်ခံစာအသစ်သည်လူနည်းစုငှားရမ်းခြင်းတိုးတက်မှုကိုပြသသည်
Apple Car ရဲ့ "လျှို့ဝှက်" စီမံကိန်းကအရင်ကထက်ပိုပြီးရှင်သန်နေပုံရသည်